ငလျင်ဒဏ် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ကူညီရန် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့များ ကမ်းလှမ်း | ဧရာဝတီ
ကျော်ခ| November 14, 2012 | Hits:4,457
4 | | ရွှေဘိုငလျင် ဒုက္ခသည် တချို့ (ဓာတ်ပုံ – နန်းသီရိလွင် / ဧရာဝတီ)
ငလျင်ဒဏ်ခံခဲ့ရသည့် ဒေသများ၌ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ကိစ္စရပ်များ အကူအညီပေးရန် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများက ကမ်းလှမ်းလာကြောင်း လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာနက ပြောသည်။
လူသားချင်း စာနာမှု အကူအညီများပေးရန် ကုလသမဂ္ဂ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် (UNDP)၊ ကုလသမဂ္ဂ လူသားချင်းစာနာမှု ဆိုင်ရာအကူ အညီပေးရေးအဖွဲ့ ကွပ်ကဲမှုရုံး (UNOCHA)၊ ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး (UNHCR) တို့ အပါအဝင် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများက ဆက်သွယ်လာခြင်းဖြစ်သည်ဟု ယင်းဝန်ကြီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးစိုးအောင်က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
“UNHCR၊ UNDP၊ UNOCHA တို့ အာစီယံအဖွဲ့တချို့နဲ့ ဂျပန်က အဖွဲ့တချို့ကနေပြီးတော့ ဘယ်လို အကူအညီတွေပေးရမလဲ၊ ဘာတွေ လုပ်ပေးရမလဲဆိုပြီးတော့ ကမ်းလှမ်းနေကြတာပေါ့။ ကျနော်တို့ကတော့ စာရင်းဇယားတွေ ငြိမ်အောင် စောင့်နေတယ်၊ ပြီးရင် ပြောပါ့မယ်ဆိုပြီးတော့ အကြောင်းပြန်ထားတယ်” ဟု ဦးစိုးအောင်က ဆိုသည်။
ငလျင်လှုပ်ခတ်မှုတွင် ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့သော နေရာဒေသများသို့ အစိုးရတာဝန်ရှိသူများ အနေဖြင့် ကွင်းဆင်း လေ့လာခဲ့ကြပြီး ထိုဒေသများ၌ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ အလှူရှင်များကို အစိုးရသတင်းစာများမှတဆင့် တရားဝင် ဖိတ်ခေါ်လျက်ရှိသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း စစ်ကိုင်းတိုင်းနှင့် မန္တလေးတိုင်းတို့၌ ယခုလ ၁၁ ရက်နေ့က ပြင်းအား ၆.၈ အဆင့်ရှိ ငလျင်လှုပ်ခတ်မှုတွင် စစ်ကိုင်း၊ ရွှေဘို၊ ကျောက်မြောင်း၊ ခင်ဦး၊ မန္တလေး၊ အမရပူရ၊ စဉ့်ကူး၊ ကျောက်ဆည်၊ သပိတ်ကျင်း စသည့်မြို့များရှိ စေတီပုထိုး၊ သာသနိက အဆောက်အအုံများ၊ လူနေအိမ်များ၊ စာသင်ကျောင်းများ၊ လမ်းတံတားများ ပျက်စီးခဲ့သည်။
ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက် အစိုးရနှင့် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ အကူအညီများဖြင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် အစိုးရသက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများနှင့် လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည် နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာန တာဝန်ရှိသူများအနေဖြင့် ရန်ကုန်မြို့၌ ယနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် စီမံကိန်း ရေးဆွဲကြမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“လူထုအတွက်ပေါ့နော်၊ ပြိုကျပျက်စီးသွားတဲ့ အိမ်တွေကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ပေးဖို့ ပုံစံတွေ ဒီဇိုင်းထုတ်နေတာပေါ့၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ များသောအားဖြင့် ပြိုပျက်သွားတဲ့ အဆောက်အအုံတွေကို မနေ့က ကျနော်တို့ ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ အင်ဂျင်နီယာတွေရဲ့ အယူအဆတွေ တော်တော်လေး အားနည်းတာကို တွေ့ခဲ့ရတယ်” ဟု ဦးစိုးအောင်က ပြောသည်။
ငလျင်အန္တရာယ်နှင့် အပျက်အစီး ဆုံးရှုံးမှုများကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ရာတွင် အထောက်အကူ ပြုနိုင်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံ ငလျင်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များကိုလည်း ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန် တာဝန်ပေးအပ်လိုက်ရာ ယနေ့ ထွက်ခွာသွားကြပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ငလျင်လှုပ်ခတ်ပြီး ၃ ရက်မြောက်နေ့အထိ အစိုးရ၏ စစ်တမ်းကောက်ယူမှုများအရ ငလျင်လှုပ်ခတ်မှုတွင် စုစုပေါင်း ၁၆ ဦး သေဆုံးကြောင်း စစ်ကိုင်းတိုင်းတွင် ၇ ဦး သေဆုံးပြီး မန္တလေးတိုင်းအတွင်း၌ ၉ ဦး ဖြစ်ကြောင်း၊ ရတနာသိဠင်္ဃ ဧရာဝတီ မြစ်ကူးတံတား စီမံကိန်းတွင် ရေထဲကျ၍ ပျောက်ဆုံးနေသူမှာ ၅ ဦး ရှိကြောင်း ဦးစိုးအောင်က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ထို့အပြင် နေအိမ် ၂၀၁ လုံး၊ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ ၅၅ လုံး၊ အခြေခံပညာကျောင်း ၂၅ ကျောင်း၊ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ၃၅ ကျောင်း၊ ဘုရားဈေတီပုထိုး ၄၅ ဆူ၊ ဆေးရုံ ဆေးပေးခန်း ၁၃ ခု၊ ရတနာသိင်္ဃတံတား တည်ဆောက်ရေး ဆိပ်ခံဗောတံတား ၁ ခုနှင့် ထရန်စဖော်မာ ၅ လုံး ပျက်စီးခဲ့သည်ဟု အစိုးရက ထုတ်ပြန်သည်။
သို့သော်လည်း လူအသေအပျောက် စာရင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကြက်ခြေနီ အဖွဲ့အစည်းများ နိုင်ငံတကာ ဖက်းဒရေးရှင်း (IFRC) က စစ်ကိုင်းတိုင်း ရွှေဘို ဗဟိုပြု ငလျင်ကြောင့် သေဆုံးသူ စုစုပေါင်း ၂၆ ဦးအထိရှိပြီး ဒဏ်ရာရရှိသူ ၂၃၁ ဦးအထိရှိသည်ဟု ထုတ်ပြန်ကြေညာထားသည်။
ယခုအခါ ထိုဒေသတွင်လည်း နောက်ဆက်တွဲ ငလျင်ငယ်များ နေ့စဉ် လှုပ်ခတ်မှုရှိနေသဖြင့် နောက်ထပ် ငလျင်ကြီးများ ထပ်ပေါ်လာမည်ကို ဒေသခံများမှာ စိုးရိမ် ထိတ်လန့်မှုများရှိနေကြောင်း၊ ပုံမှန်အလုပ် အကိုင်များ သွားလာလုပ်ကိုင်ရန် အတွက်လည်း စိုးရိမ်နေကြကြောင်း ဒေသခံများက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
“လူတွေကတော့ နောက်ထပ် လှုပ်လာမှာ ကြောက်နေကြတာပေါ့ဗျာ၊ အခုဆို အလုပ်ပျက်အကိုင်ပျက်၊ စလှုပ်တဲ့ နေ့တုန်းကဆိုလည်း အားလုံးကြောက်ကြတာပေါ့။ အတွေ့အကြုံကလည်းမရှိ ကြုံမှမကြုံဖူးကြတာ ဆိုတော့လေ၊ လှုပ်တဲ့ အချိန်က ကြောက်လို့ ကုန်းရုန်းထလည်း မရဘူး၊ လုံးဝပြန်လဲတာပဲ ဒူးတွေဘာတွေကို ပွန်းတယ်” ဟု သပိတ်ကျင်း ဒေသခံ ဦးမောင်စိန်က ပြောသည်။
သပိတ်ကျင်းမြို့ခံ ကိုဇော်မိုးထက်က “စာသင်ကျောင်းတွေကတော့ ဒီမြို့ပေါ်ကကျောင်းတွေရော ရွာတွေက ကျောင်းတွေရော အကုန်လုံး ပိတ်ထားရတာ၊ ပြန်မဖွင့်သေးဘူးလေ၊ ငလျင်ကလည်း ခုချိန်ထိကို တနားရီခြား၊ နှစ်နာရီခြားတခါလှုပ်နေတော့လေ၊ အဲလိုလှုပ်တော့ အရင်လှုပ်တဲ့ ဒဏ်နဲ့ အက်နေတဲ့ အဆောက်အဦးတွေတောင် ပြိုပြိုသွားတယ်၊ စိတ်မချရသေးဘူး” ဟု ဆိုသည်။
လတ်တလောတွင် ငလျင်ဒဏ်ကြောင့် အိုးအိမ်ပျက်စီးခဲ့သူများနှင့် စိတ်ချရမှု မရှိသေးသော အဆောက်အုံများတွင် နေထိုင်သူများကို ကွင်းပြင်များတွင် ယာယီတဲများ ဆောက်လုပ်ပေး၍ လူမှုကူညီရေး အသင်းများ အပါအဝင် ဒေသဆိုင်ရာ အစိုးရ အဖွဲ့ဝင်များနှင့် နိုင်ငံရေး ပါတီအချို့က အစားအသောက်နှင့် အဝတ်အထည်များ လှူဒါန်းပေးလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ငလျင်ဒဏ်ခံခဲ့ရသူများအတွက် နိုင်ငံရေး ပါတီကြီးများကလည်း အကူအညီပေးနေရာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ညွှန်ကြား ချက်ဖြင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က ကျပ် သိန်း ၁၀၀ လှူဒါန်းသကဲ့သို့ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီကလည်း ဒေသဆိုင်ရာ ပါတီတာဝန်ရှိသူများနှင့် ကွင်းဆင်း ကူညီပေးလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
“သက်ဆိုင်ရာ နေရာတွေမှာရှိနေတဲ့ ကျနော်တို့ ပါတီအဖွဲ့ဝင်တွေကတော့ သွားရောက်ကူညီမှုတွေတော့ ရှိနေပါတယ်၊ လိုအပ်မှုတွေ ရှိလာရင်တော့ ဗဟိုကို တင်ပြလာကြပါလိမ့်မယ်၊ ဗဟိုကို တင်ပြလာရင်လည်း ဝိုင်းစဉ်းစားပြီး အကူအညီတွေ အတွက် လုပ်ပေးမှာပါ” ဟု ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ ဒုဥက္ကဌ ဦးဌေးဦး က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်မှာ မူးယစ်မှောင်ခို သမားတွေ ဖမ်းမိ
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment ရာဇာ November 14, 2012 - 7:41 pm	အော်….ကိုကြီးစိုး ရယ်….စာရင်းဇယား တွေ ငြိမ်အောင်များ စောင့်နေရတယ်လို့….ဖြစ်မှဖြစ်ရလေဗျာ…အဲဒီစာရင်းဇယား တွေငြိမ်အောင် ဘယ်အချိန်ထိ စောင့်ရမှာလဲ????…အဲ့ဒီ စာရင်းဇယားတွေ ငြိမ်အောင် ကိုကြီးစိုး တို့က ၁၀ နှစ်စောင့်လဲ ပြသနာ မရှိဘူးလေ..နေစရာ စားစရာတွေက အပြည့်နဲ့ကိုး….ဟိုမှာ တကယ်တန်း ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ သူတွေက တရက်မပြောနဲ့ တနာရီတောင် မစောင့်နိုင်ကြတော့ဘူး….စားစရာမရှိ..နေစရာမရှိ တဲ့ သူတွေရဲ့ ဘဝလေးကို ခေတ္တခဏ စိတ်ထဲ စဉ်းစားပြီး မှ ပြောပါဗျာ….ပေးချင်တဲ့သူရှိနေတာတောင် အချိန်ကို စောင့်ခိုင်းနေရယ်လို့ဗျာ…သူတို့အကူအညီ ပေးမယ်ဆိုတာ ဘာစာရင်းဇယား နဲ့မှ မဆိုင်ပါဘူးဗျာ…လောလောဆယ် ရထားတဲ့ လူဦးရေ ဘယ်လောက်ဆိုတာ လေးပေးလိုက်ရင် သူတို့လုပ်တတ်ပါတယ်….ပစ္စည်းလိုလို့ ထပ်မှာရင်လဲ ၂၄ နာရီ အတွင်း ရနိုင်ပါတယ်….အစားအစာ ဆိုလဲ အခြေခံကြ တဲ့ ဆန်ဆီဆား ကပြည်တွင်းမှာရပါတယ်…အဓိက ငွေပါဘဲ….ခက်တယ်…ကိုယ့်အတွက် ဆိုရင် တမိနစ်တောင် အစွန်းမခံနိုင် ကြပေမဲ့ အများအတွက်ဆိုရင် ဟိုလူ့ခွင့်ပြုချက်ယူရ..ဒီလူ့ခွင့်ပြုချက် ယူရနဲ့ အချိန်တွေ ဖြုန်းနေကြတယ်….လိုအပ်ရင် prompt action လေးများ လုပ်ကြပါအုံး….စကားမစပ်…..ရခိုင်အရေး အတွက် လူသားခြင်း စာနာလို့ အကူအညီတွေ ပေးချင်လှချည်ရဲ့ ဆိုတဲ့ OIC အသင်းရော ကူညီဘို့ ကမ်းလှမ်းသေးလား???????….ကြုံရင် မေးကြည့်လိုက်ပါအုံး…